Kuze kube manje, ithuthukiswe ezingaphezu kuka-70 nezinhlobo nezixhumi ngezinjongo ahlukahlukene umugqa fiber-optic. Okuvame kakhulu - lesinesitfombe-sibuko nezixhumi optic ukuba samuntu uhlobo ipulaki. Ukuze yokuxhuma nezixhumi enjalo zisebenzisa adapters ekhethekile optic. Ngalezi amadivayisi nezixhumi kokuzalela optical kungaba eyodwa noma ezimbalwa izinhlobo.
Incazelo isixhumi optical design
Pluggable nezixhumi optical kanje: fibre iqinile e ngokunemba ekhethekile ithiphu uhlobo "ferrule", okuyinto ufakwa faka-ukugxilisa. Iziqobosho nezixhumi e adaptha kungaba uhlobo insabule noma kochungechunge noma yokuvala. Kwezinye izinhlobo imishini iyadingeka ukuxhuma ngababili Duplex imicu optical, ikakhulukazi nezixhumi fiber uhlobo Duplex zenzelwe. Ekuqaleni, ukuqaliswa zinsizakuphila kufinyelelwa ngenxa ziyalingana plastic isiqeshana ehlanganisa esokhethini lapho ishunyekwa yebhangqa nezixhumi, okwathi ngemva kwalokho babuyela ayethe njo isiqhebezo. Iningi efanelekayo le njongo nezixhumi izakhiwo sikwele. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi kwadingeka ukuthuthukisa nezixhumi Duplex fibre ezifana in iphasela single.
Isigaba esilandelayo sokuthuthuka ukwenziwa fibre optic nezixhumi bekulokhu ukudalwa ekhethekile nezixhumi ibhande uhlobo lonke sesikhashana enamathela. Nokho, namuhla, lolu hlobo akuyona ethandwa kakhulu ngenxa yokuthi kwakunzima ukuthola eliphezulu umthungo, ngisho nokusetshenziswa indlela Welding. Okwamanje, abathengi eyinhloko nezixhumi wathi kukhona Japan nase-United States.
Amapharamitha eyinhloko nezixhumi fiber -bandwidth, ukuzinza eside futhi ukumelana nezimo zangaphandle. Komkhawulokudonsa kuthinta emuva ukucabangisisa Ukufakwa ukulahlekelwa. Lezi zimo zokuma kuxhomeke ukufuduka transverse we ngezimbazo igebe eliphakathi kwabo. Esinye isiginali kusuka zibona Fresnel emngceleni uhlukanisa abezindaba ezimbili. Umkhawulo ukulahlekelwa value, okuyinto langena isixhumi kuyinto attenuation optical. Lesi sici kuthinta inani ukulahlekelwa Imininingwane esiqeshini. Lokhu ipharamitha incike ukuphambuka lateral (misalignment) cores exhunywe Imicu yotshani optical.
Ngakusasa ipharamitha ezibalulekile - reflection emuva. Umthombo oyinhloko ezinomthelela lesi sici, - umngcele ukuhlukana phakathi kwabezindaba ezimbili (emoyeni yemisipha). Le ngxenye ongafinyelela amanani abalulekile. Ngaphezu kwalokho, emuva-reflection kungaba iyashintsha ngesikhathi, okungukuthi, bangaphansi kwethonya izici sangaphandle ekugcineni wakwazi kanjani ukugqashula uhlelo lwakho lonke.
Manje eziningi udumo kuleli izinhlelo idivayisi yomsindo bathola fibre optic amakhebuli. Inzuzo enkulu yalezi izintambo ukungabi umsindo, ngakho-ke, isiginali uzohlala futhi upholile, naphezu ubude isandiso. Fibre optic izintambo zikufakazela ngokwabo ukusebenza onokwethenjelwa imvelo eziyinkimbinkimbi kagesi, lapho izintambo zethusi asikwazanga ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi umsindo. Ubuchwepheshe computer othandwa kakhulu ikhebula SPDIF (Sony-Philips Digital Interface) - interface ngokudlulisa amasignali umsindo ngendlela yedijithali. It idlulisela amasignali umsindo phakathi amadivayisi ngaphandle izinga ukulahlekelwa ukuthi nakanjani kwenzeka uma indlela analog.
Amadokhumenti e-Office: yini MFP?
MSI 770-C45: Ukucaciswa, imiyalelo, kanye nokubuyekeza izibuyekezo
Ukuqala kokunyathelisa eRussia
UMargarita Boyko - biography, career, ukuqeqeshwa. Amathiphu okudla
Micro USB-izixhumi. Izinhlobo USB nezixhumi, izici zabo
Isu abasuselwe-Android - uhlu imidlalo ethandwa kakhulu